Archive du 20200224
Kere any Atsimon’ny Nosy Andrasana ny vahaolana maharitra
Nitsidika ny kaominina Maroalomainty sy Maroalompoty, distrikan’Ambovombe sy kaominina Sampona, distrikan'Amboasary Atsimo,
Tratry ny ady an-kafetsena?
Tsy hita be ihany ny raharaham-pirenentsika amin’izao fotoana izao. Toa mba misy tsirim-panantenana ihany satria misy ny fampanantenana volabe, raha tsy hilaza afatsy ny an’ny Frantsay.
Orinasa misehatra amin’ny voatabia any Nizeria Mahatratra 20 tapitrisa dolara ny fampiasam-bola
Fibodoana tanin`olona any Toliara Tompon’andraikitra tamin`ny FAT voarohirohy
Miverina indray ilay raharaha hala-tany izay mahavoarohirohy tompon’andraikitra ambony iray tamin`ny tetezamita.
ENTONA FANDREHITRA Niaka-bidy hatrany amin’ny 11 %
Misy fiantraikany amin’ny toekarena eran-tany ny fiparitahan’ilay otrik’aretina coronavirus any Sina.
Fanafihana mitam-piadiana Nandriaka ny ra, lasa ny vola 14 tapitrisa Ar
Nandriaka ny ra teny Malaza Andoharanofotsy. Vola hakana entana moa no nalainy.
Vary 106 taonina nodorana sy nalevina Nisy nangady sy nivarotra indray
Ahiana hitera-doza any amin’ny distrikan’i Vohémar ilay vary efa lany daty ana orinasa iray tany Antsanimalo nalevina tao anaty lavaka ary nodorana.
ZAIMAIKA ANALAKELY Nihotsaka ny tafo
Nihotsaka, entana maro no simba Nihotsaka ny tafon-tranon’ny zaimaika, toerana fivarotana sakafo masaka etsy Analakely.
VEHIVAVY MANANA FAHASEMBANANA Mbola ailiky ny fiarahamonina hatrany
Maro amin’ireo vehivavy manana fahasembanana no mbola ailiky ny fiarahamonina hatreto, indrindra fa eo amin’ny resaka asa.
Jeneraly Ravalomanana mivady Nanome mari-pankasitrahana ireo zanaka zandary mendrika
Notoloran’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena Jeneraly Richard Ravalomanana mivady mari-pakasitrahana ireo zanaka zandary mendrika tamin’ireo fanadinana ara-panjakàna
Vola ho an’ny tany an-dalam-pandrosoana Manjaka ny fanodinkodinana, hoy ny Banky Iraisam-pirenena
Rariny raha mbola matroka hatrany ny tarehimarika ara-toekaren’ireo firenena mahantra sy an-dalam-pandrosoana tahaka an’i Madagasikara.